जिल्ला अस्पतालमा उपचारमै समस्या- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २६, २०७६ मोहन शाही
डोटी — मोटरसाइकलमा रहेका पत्रकार विक्रम खडका अछामबाट आइरहेको बससँग ठोक्किएर दुर्घटनामा परे । घटनामा दिपायल–७ का ऐश्वर्य विष्ट र कल्पना बोहरा पनि घाइते भए । घाइते तीनै जनालाई आफन्तले तत्कालै जिल्ला अस्पतालमा पुर्‍याए ।
प्राथमिक उपचारपछि अस्पतालले उनीहरूलाई एक्स–रेका लागि १५ किमि टाढा दिपायलस्थित शैलेश्वरी अस्पताल रिफर गर्‍यो ।
जिल्ला अस्पतालमा बिरामी उपचारका लागि पुर्‍याएपपिछ मात्रै एक्सरे मेसिन बिग्रेको थाहा पाएका आफन्त आक्रोशित भए । बिरामीलाई अत्यावश्यक हुने एक्सरे मर्मतमा किन ध्यान नदिएको भन्दै मञ्जु बिष्टले दिपायल–सिलगढी नगरपालिका प्रमुख मञ्जु मलासीलाई सोधिन् । नगरप्रमुख मसाली आफूलाई त्यसबारे जानकारी नै नभएको भन्दै अस्पतालका कर्मचारीमाथि आक्रोशित भइन् । उनले अस्पतालमै पुगेर एक्सरेको अवस्थाबारे डा. गिरीश अवस्थीसँग सोधपुछ गरिन् ।
डा. अवस्थीले भने ‘डाक्टरै नभएको अस्पतालमा एक्सरे मात्रै भएर के गर्ने ?’ डा. अवस्थी केही वर्षयता गैरसरकारी संस्था निक साइमनमार्फत नियुक्त भएर यहाँ काम गरिरहेका छन् । सरकारी दरबन्दीका डाक्टर जिल्ला अस्पतालमा नहुँदा उपचारमा कठिनाइ भइरहेको उनले बताए ।
कुनै बेला सुदूरपश्चिमका अन्य पहाडी जिल्लाको तुलनामा सम्पन्न मानिएको जिल्ला अस्पताल यतिबेला सामान्य बिरामीलाई पनि उपचार दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । दिपायल–७ रातुलीका कर्ण विष्टले केही दिनअघि आफ्नो निधारमा लागेको चोटको टाका काट्न आउदा ब्लेड नै नपाएको दुखेसो सुनाए । ‘ब्लेड खोज्न अस्पतालभरि भौंतारिएँ, फार्मेसीमा पनि पाएन,’ उनले भने, ‘पछि बाहिरको मेडिकलबाट किनेर ल्याइदिएपछि डाक्टरहरूले टाँका काटिदिए । ब्लेड, एक्सरे, सुई, औषधि र डाक्टर नभएको अस्पताललाई कसरी जिल्ला अस्पताल मान्ने ?’ जिल्ला अस्पतालको अवस्था सुधारमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए ।
नगरप्रमुख मलासीले अस्पतालको स्तरवृद्धिका लागि आफू गम्भीर रहेको बताइन् । अस्पतालमा गत वर्ष नगरपालिकाले १० लाख बराबरका उपकरण खरिदका लागि सहयोग गरे पनि कर्मचारीले काम नगरेको उनले गुनासो गरिन् ।
जिल्ला अस्पताल डोटीमा दसौं तहका एक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसहित चारजना चिकित्सकको दरबन्दी छ । लामो समयदेखि दरबन्दी रिक्त छ । आठौं तहका एकजना चिकित्सक मात्रै हाल कार्यरत छन् । ‘एकजना मेसुसहित दसौं र नवौं तहका दुई जनाको दरबन्दी त छ तर पदपूर्ति कहिल्यै भएको छैन,’ डा. भूषण मिश्रले भने, ‘म पनि स्थानीय तहमा समायोजनमा परेर चिठी पर्खेर बसेको छु । आउनेबित्तिकै जानुपर्छ ।’ उनी गएपछि तत्काल अरू नआउने हो भने यहाँ स्वास्थ्यकर्मी नै रहनेछैनन् ।
जिल्ला अस्पतालहरूको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारअन्तर्गत छ । समायोजनमा प्रदेशमा जम्मा २ जना चिकित्सक परेका छन् । जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका डाक्टर नआउने भएपछि २०६९ सालदेखि डोटी अस्पतालमा गैरसरकारी संस्थाले नियुक्त गरेका चिकित्सकले सेवा गर्दै आएका छन् ।
निक साइमन्स संस्थाले एमडीजीपी डा. गिरीश अवस्थी र एमबीबीएस डा. खुर्सिद आलम खानलाई जिल्ला अस्पतालमा खटाएको छ । दुवै जनाको सेवासुविधा उक्त संस्थाले बेहोर्ने गरेको छ । तिनै दुईका भरमा जिल्ला अस्पतालमा आकस्मिक र प्रसूति सेवालगायत शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।
अस्पतालमा अत्याधुनिक उपकरण नभएका होइनन् । सबै बिग्रेर थन्केका छन् । विद्युत् अनियमित हुनु र भए पनि भोल्टेज अपडाउन भइरहँदा उपकरण बिग्रने गरेको गुनासो स्वास्थ्यकर्मीको छ । सबै विद्युतीय उपकरण बिग्रेको अवस्थामा रहनुले सेवा प्रभावित रहेको कर्मचारी सुरेश बानियाँले बताए । उनी पनि निक साइमन्सले खटाएका कर्मचारी हुन् ।
‘कतिपय सामग्री त हामी आफैं मर्मत गरेर काम चलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कतिपय उपकरण सुदूरपश्चिमका जिल्ला अस्पतालका मर्मत गर्ने ठेक्का लिएको मेडिलोस कम्पनीले बनाउने गर्छ । उसले पनि काठमाडौं या दिल्लीबाट मान्छे झिकाउने भएकाले समयमै काम हुन्न ।’ विद्युत् सेवा भरपर्दो भइदिए अस्पतालका सबैजसो उपकरण क्षति हुनबाट जोगिने उनको भनाइ छ । प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०९:१०
सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी हाटबजार व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको उनले बताए । ‘त्यही समितिले हाटबजारको नियमित सञ्चालन गरिहेको छ,’ उनले भने, ‘ठूला व्यापारीले कब्जा गरिएको पाइए स्थानीय किसानका लागि ठाउँ खाली गरिनेछ ।’
प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०९:०९